Ihe niile ịchọrọ Aboutmara banyere Javicia Leslie, Nwanyị nwanyị mbụ
Tọ ụwa enweela ọtụtụ ihe mere ọ ga-eji na-eru uju n'oge a. Anyị nọ n'etiti nsogbu abụọ nke ụwa dum - coronavirus na ịkpa ókè agbụrụ - na nso nso a, mmiri iri mmiri nke mbụ ọṅụ kpakpando, Naya Rivera. Achọrọ m ịgbakwunye na anyị malitere afọ ida akụkọ akụkọ ahụ Kobe Bryant? Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na 2020 bịara na ihe ọ bụla ma nnukwu ọhụụ. Ọfọn, Javicia Leslie na-enye anyị ihe mere anyị ga-eji mee ememe na ozi ọma na nso nso a nke na-akwado ya dị ka nwanyị nwanyị Black Bat first na TV. Javicia Leslie Black Nwanyị nwanyị.
N'ịghọta akara a, Javicia kwuru, "Enwere m nnukwu mpako na m bụ nwanyị mbụ na-eme ihe nkiri na-egwu egwu dị ka Bat Woman na telivishọn, a sọkwaara m dị ka nwanyị na-enwe mmekọahụ na nwanyị, enwere m ihe ùgwù isonye na ihe nkiri a dị egwu nke bụụrụ ndị LGBTQ + obodo.
Maka ụmụ obere ụmụ ojii ojii niile na-arọ nrọ ịbụ dike otu ụbọchị… ọ ga-ekwe omume!
A post na-akọrọ site Javicia Leslie (@javicia) na Jul 8, 2020 na 3: 55pm PDT
Javicia Leslie dere akpa a mgbe ọpụpụ nke nwanyị Nwanyị nwanyị mbụ nwụrụ, Ruby Rose, onye hapụrụ usoro ahụ na mbido afọ a na Mee. Ruby, na ozi ekele Javicia kwuru, “Nke a dị ịtụnanya !! Obi dị m ụtọ na nwanyị nwanyị Black Woman ga-egwu. Achọrọ m ikele Javicia Leslie maka iweghara ọkwa bat. Na-abanye n'ime nkedo dị ịtụnanya na ndị ọrụ ụgbọ mmiri. Enweghị m ike ịnọ na-ekiri oge 2 ị ga-abụ ihe ịtụnanya !! " Javicia Leslie Black Nwanyị nwanyị.
OMG !! Nke a dị ịtụnanya !! Obi dị m ụtọ na nwanyị nwanyị Black Woman ga-egwu. Achọrọ m ikekele Javicia Leslie maka iwere ọkwa bat. Na-abanye n'ime nkedo dị ịtụnanya na ndị ọrụ ụgbọ mmiri. Enweghị m ike ịnọ na-ekiri oge 2 ị ga-abụ ihe ịtụnanya !! ❤️
A post na-akọrọ site Ruby Rose (@rubyrose) na Jul 8, 2020 na 3: 35pm PDT
Javicia ga na-egwuri egwu agwa ọhụrụ akpọrọ Ryan Wilder, ewepụtara site na ndị dere na adịghị anọ na-atọ ọchị ọchị ndị a kọwara dị iche iche kọwara dị ka “ihe ga-ekwe omume, ọgbaghara, obere goofy na enweghị aha. Ọ bụghị ihe ọ bụla dị ka Kate Kane (nke Ruby Rose mere na mbụ), nwanyị nke yi Batsuit n'ihu ya.
N'inweghị onye ọ bụla na ndụ ya iji gbochie ya, Ryan nọrọ ọtụtụ afọ dị ka onye na-agba ọgwụ ọjọọ, na-agbada GCPD ma jiri omume ọjọọ masịrị mgbu ya. Taa Ryan bi na ala ya na osisi ya. Nwatakịrị nwanyị ga-ezuru mmiri ara ehi maka mmiri pịrị apị ma nweekwa ike iji aka ya gbuo gị, Ryan bụ ụdị ọgụ dị egwu: onye nwere ọgụgụ isi nke ukwuu na nke enweghị akọ. Ọ bụ nwanyị nwere mmasị nwanyị, onye na-eme egwuregwu, nke ndu, nke nwere mmasị, nke na-adịghị eche ihu, na ọ bụghị dike gị nke America niile. ” Javicia Leslie Black Nwanyị nwanyị.
Ewerela ụdị nnọchite a dị ka mmeri ọ bụghị naanị maka ndị Ojii kama maka mpaghara LGBTQ +.
Nke a bụ maka gị.
A post na-akọrọ site Javicia Leslie (@javicia) na Jul 9, 2020 na 12: 35pm PDT
Onye na-eme ọrụ
Onye German mụrụ, onye omekorita America bidoro ọrụ ya na 2016 mgbe ọ gbasoro ihe nkiri Onye na-egbu egbu. Leadzọ mbu ụzọ ya na ihe nkiri dị na Net Net nke Netflix Rom-Com nke afọ 2019, Mgbe niile bụ nwanyị a na-alụ ọhụrụ, ebe ọ na-egwuri Corina, onye na-alụ nwanyị ọhụrụ.
Tupu ihe nkiri ndị a, Javicia ama ama n'ọtụtụ mmepụta mgbe ọ na-aga Mahadum Hampton, gụnyere Nduzi asaa, Maka Girlsmụ nwanyị Na-acha Ọcha na Chicago. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, ọ kwagara Los Angeles ebe ọrụ ya na-atọ ụtọ. Ọ gosipụtara n'usoro TV, Chef Julian ma nweela ugboro ugboro na CBS MacGyver reboot na Chineke Chukwu M. Ọzọkwa, ọ pụtara dị ka onye isi na Carl Weber's Azụmaahịa Ezinaụlọ tinyere onye oru, Ernie Hudson na BET.
Ọ hụrụ ya n'anya
Javicia nwere mmasi maka ahuike na veganism. Mgbe ọ na-anọghị, ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na -emepụta usoro nri anaghị eri anụ nke o biputere na Instagram ya na ndị na-eso ụzọ 106K + ya. Ọ na-arụ ọrụ ebere afọ ọ bụla, Nleta Chandler, nke ndị ntorobịa n'obodo ya.
Ọ ga - abụ njirimara Style Rave na-enweghị obere ụdị? Ehee, Javicia nwere otutu na ya! N'elu kapeeti na-acha ọbara ọbara, oge ọ na-aga bụ oge uwe, ọ bụ ma ọ bụ pant suut ma ọ bụ uwe dabara adaba. Gbanyụ akwa kapeeti uhie, ị nwere ike ịhụ ya n'ụdị kachasị nke ndị na-agba sneakers ma dabara adaba dị ka tees na asọmpi egwuregwu.
Site n'ịwelite ọrụ ya n'oge na-adịbeghị anya, anyị na-atụ anya ịhụkwu nke ya na kapeeti uhie - ozugbo ihe laghachiri 'dị mma' - anyị enweghị ike ichere ịhụ ka ụzọ ya si na-aga n'ihu. Javicia Leslie Black Nwanyị nwanyị.
Lee ihe nke Javicia Leslie's Red Carpet Style…
Ekele Javicia Leslie! Anyị na-atụ anya ịhụ gị na TV anyị na-abịa 2021! Ee, nwantakiri ohuru a gha alaghachi n’inyocha gi n’aho ozo.
Ebe E Si Nweta Foto: Instagram | Javicia Javicia Leslie Black Nwanyị nwanyị.
Batwoman nwa nwanyị ojii Javicia Leslie LGBTQ + Blackmụ nwanyị Black Ndụ Mkpa
Rave News Digest: Kanye West kwụsịrị Ọsọ Onye isi ala, Gokada guzobere Fahim Saleh Gbuo, Window Nyefe + More
Ego / Ọrụ
Superstars Isi ihe na-aga nke ọma: Tyra Banks, Drew Barrymore, Gywneth Paltrow Na-eso Womenmụ nwanyị Na-aga Ego Ike njem